Mogadishu Journal » Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kulamo ka bilaabay Baydhabo
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kulamo ka bilaabay Baydhabo
Mjournal :-Madaxweynaha cusub ee loo doortay maamulka Koonfur Galbeed ayaa Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed ka bilaabay kulamo kala duwan oo uu la qaadanaayo qeybaha kala duwan ee bulshadda.
C/casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen), ayaa xalay kulamo la qaatay saraakiisha Amaanka ee Maamulka Koofur Galbeed, waxaana uu kala hadlay Ammaanka Magaalada Baydhabo.
Waxaa uu sidoo kale kala hadlay Ciidamada Booliska sidii xal loogu heli lahaa boqolaal ka mid ah Shacabka Magaalada Baydhabo oo xabsiyadda ku jira.
Maanta ayuu kulamo la yeelan doonaan waxgaradka oo doorashada uu kusoo baxay si weyn uga soo horjeeday.
Shacabka Magaalada Baydhabo ayaa kasoo horjeedda Madaxweynaha la doortay ee Laftagareen, waxaana ay sheegeen in ay taageersan yihiin Mukhtaar Roobow oo laga soo xiray Magaalada.
Xuska Aas aaska Booliiska oo hadda ka socota Muqdisho